Hạt giống Hoa Cúc Vàng | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Hạt giống Hoa Cúc Vàng | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Ichrysanthemum etyheli yintyatyambo eyaziwa kakhulu eVietnam. Zisetyenziswa rhoqo kubomi bethu bemihla ngemihla. Ngoko ke, i imbewu yechrysanthemum etyheli zifukanywe kakhulu ukuhlangabezana nemfuno enkulu evela kubathengi. Ngoko ke zeziphi iimpawu kunye nendlela yokukhulisa nokunyamekela i-chrysanthemums ephuzi ukusuka kwimbewu, uyazi?
1 Intshayelelo ethile malunga neentlobo etyheli zechrysanthemum
2 Intsingiselo eqhelekileyo yohlobo lwechrysanthemum etyheli
3 Imiyalelo malunga nendlela yokukhetha imbewu yechrysanthemum ephuzi, kulula ukuyihluma
3.2 Ukuphelelwa lixesha
3.3 Izinga lokuhluma
3.4 Khetha imbewu egcinwe kakuhle
4 Indlela yokukhulisa kunye nokunyamekela i-chrysanthemums ephuzi ngokulula nangempumelelo
4.1 Imiyalelo malunga nendlela yokukhulisa i-chrysanthemum ngokufanelekileyo
4.2 Indlela yokunyamekela i-chrysanthemums emva kokutyala
5 Lithini ixabiso lembewu yechrysanthemum etyheli?
6 Umyezo weLanga – Indawo ehloniphekileyo yokuthengisa imbewu yechrysanthemum ephuzi, ixabiso elihle
Intshayelelo ethile malunga neentlobo etyheli zechrysanthemum
Ichrysanthemum etyheli luhlobo lweentyatyambo ezihluke kakhulu. Kukho ngaphezu kwe-1500 iintlobo ezahlukeneyo zembewu yechrysanthemum ehlabathini. Ngenxa yokuba umthubi ngumbala odumileyo, phantse zonke iintlobo zechrysanthemum ngoku zinalo mbala.
I-chrysanthemum etyheli inegama lenzululwazi eliqhelekileyo kunye nezinye iindidi, iChrysanthemum. Imvelaphi yechrysanthemums ivela ikakhulu eTshayina naseJapan. Kamva, ngokufuya nokuthumela ngaphandle, zavela kulo lonke ihlabathi, ingakumbi eAsia. EVietnam, imbewu yechrysanthemum ephuzi iyona pesenti inkulu.
I-Chrysanthemum isityalo se-herbaceous, imbewu ihluma kakuhle. Njengabantu abadala, ubude babo buqala kwi-70cm ukuya kwi-90cm. Isiqu sedaisy sinamaqhuqhuva amaninzi kwaye sishwabene kakhulu, siqhawuke lula. Ngokuxhomekeke kwiimeko zokukhula, isiqu sinokuma okanye sikhase. I-Chrysanthemum sisityalo esinegqabi elinye esikhula ngokutshintshanayo kwaye sinobume obunentsiba.
KwiVietnam, imbewu yechrysanthemum etyheli lolona didi lulinywa kakhulu. Isizathu kukuba zifanelekile kwimozulu yelizwe lethu, kwaye zisetyenziswa kakhulu kwiiholide ezibalulekileyo kunye neziganeko. Ngenxa yokuthandwa okunjalo, intsingiselo kunye nendlela yokukhulisa nokunyamekela i-chrysanthemums ephuzi evela kwimbewu ifundwa ngabantu abaninzi.
Usenokuba nomdla: Imbewu yeChrysanthemum
Intsingiselo eqhelekileyo yohlobo lwechrysanthemum etyheli
Ezi imbewu yechrysanthemum etyheli idumileyo kungekuphela ngenxa yokuba lo ngumbala oqhelekileyo. Enyanisweni, le ntyatyambo ineentsingiselo ezininzi ezintle ezithandwa ngabantu abaninzi. Eso sisizathu sokuba zisetyenziswe kakhulu ngezihlandlo ezibalulekileyo. Ngokukodwa, kwiholide yeTet, i-chrysanthemum ephuzi yeyona ntyatyambo isetyenziswa kakhulu.
Iichrysanthemums ezityheli zibonakalisa ubuhandiba
Ichrysanthemum emthubi yaziwa njengentyatyambo emele umlawuli, ebonisa ubuhandiba kunye nobutyebi. Ukususela kumaxesha amandulo, baye baba ngumqondiso oqhelekileyo ohonjiswe kwiimpahla zookumkani. Namhlanje, ngoMhla woNyaka omtsha, iiholide ezinkulu, i-chrysanthemums zihlala zikhethwa ukuba zibonise kwisibingelelo. Yeyiphi indlu elumke ngakumbi iya kuthenga imbewu yechrysanthemum etyheli malunga nokutyala.
Iichrysanthemums eziphuzi zisoloko zisetyenziswa ekuqaleni konyaka kuba intsingiselo yazo ifana nokunqwenela ithamsanqa. Umboniso we-chrysanthemums ephuzi endlwini yimbonakaliso yomnqweno wokuba nomnyaka omtsha ophumelelayo, ocebileyo kunye nenhlanhla. Nangona, ngokwemveli, i-chrysanthemum yenye yeentlobo ezine zemithi enqabileyo, eqingqwe kakhulu kwimizobo, ebizwa ngokuba yimizobo yeekota ezine.
Ubuhandiba be-chrysanthemums bubonakaliswa nakwinkcubeko yamanye amazwe. E-China, umzekelo, zikrolwe kwiingqekembe zerenminbi. Kwaye unanamhla oku, le mali isasasazwa ngokubanzi. Ngeli xesha eJapan, i-chrysanthemum etyheli iphoswa kwi-emblem yesizwe.
Ifanekisela ukuhlonelwa kwenzala kwinzala
Kwilizwe ngalinye, intsingiselo ye-chrysanthemum ephuzi ichazwa ngokwahlukileyo. EVietnam, i-chrysanthemum yaziwa kakhulu njengophawu lobuthixo. Le ntsingiselo iphuma kwintsomi phantse wonke umntu wayiva xa babengabantwana.
Ngokutsho kwentsomi, ukuze kusindiswe ubomi bukanina, intombazana yaya etempileni ukuze ithandazele intsikelelo kanina. Echukunyiswe ngokunyaniseka, uBuddha wabonisa kwaye wanikela ngentyatyambo eqaqambileyo, ebonisa ubomi bomama wentombazana encinci. Kodwa intyatyambo inamagqabi ama-5 kuphela, oku kuthetha ukuba unina unokuphila iminyaka emi-5 kuphela. Ukuze incede unina aphile ixesha elide, le ntwazana yawakrazula loo magqabi ukuze ingakwazi ukuwabala.
Iintyatyambo zithetha ithamsanqa
Ukuba ukholelwa kwi-feng shui, uya kukwazi ukuba i-chrysanthemum ephuzi yintyatyambo ezisa inhlanhla. Basenokunceda nokugxotha imimoya engendawo, ukuzisa amathamsanqa kwaye ukhusele usapho lwakho ngeyona nto ilungileyo. Ke, ngeentsuku zokuqala zonyaka, ukukhula kwe-chrysanthemum endlwini kuya kunceda abanini bezindlu ukuba babe nesiqalo esilungileyo nesikhuselekileyo sonyaka.
Iidaisies ezityheli zibonisa ubomi obude
Enye intsingiselo entle yeedaisies ezityheli kukuba zimela ubomi obude. Le ntsingiselo isuka kwintsomi yamandulo yaseTshayina kwaye isasasazwa nanamhlanje. Ibali lelokuba kwisiqithi esiyintlango kuphela le ntyatyambo inokukhula kwaye ikhule. Ke ubomi obude bubuye bube lixabiso elihle elinalo ichrysanthemum etyheli.
Imiyalelo malunga nendlela yokukhetha imbewu yechrysanthemum ephuzi, kulula ukuyihluma
Ngemfuno enkulu ye-chrysanthemums ephuzi, ithandwa kakhulu ukuyikhulisa kwinqanaba elikhulu okanye kwintsapho. I-Chrysanthemum yintyatyambo ekulula kakhulu ukuyiphila kunye nokukhula. Nangona sisandla esithe tye, kodwa ngeentlobo ezilungileyo, usenako ukukhulisa igadi yedaisy njengoko uthanda. Ke, ukuze ube nokulungileyo, kulula ukuntshula imbewu yechrysanthemum emthubi ukusuka ngezantsi ziikhrayitheriya ekufuneka uziqonde:
Imbewu yechrysanthemum etyheli Luhlobo olulula kakhulu ukuntshula. Xa kuthelekiswa nezinye iintyatyambo ezinzima-ukunyamekela, ukukhetha imbewu ye-chrysanthemum akunzima kakhulu. Ngokukodwa xa kukho imithombo emininzi yokusabalalisa umgangatho onokuthi ugrumbe kuyo.
Isuka eTshayina naseJapan, la mazwe ahlala ingawona mazwe abekwe phambili. Nangona kunjalo, imeko yokwenza iimpahla ezikumgangatho ophantsi eTshayina zininzi kakhulu. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuthenga inzala elungileyo apha, kufuneka uhlawule ngakumbi idilesi kunye nophawu.
Ngaphandle kwala mazwe mabini angasentla, iKorea, i-US okanye iNetherlands nazo ziindawo zembewu elungileyo. Enkosi kubuchwephesha obuphezulu, i imbewu yechrysanthemum etyheli ezahlukeneyo apha. Eyona nto ixhaphakileyo kwezi mbewu kukuba zivelisa iintyatyambo ezingqukuva, ezinkulu kunye nemibala emihle kakhulu.
Enyanisweni, imbewu ye-chrysanthemum ephuzi iya kuhlolwa ngononophelo ngaphambi kokuba ipakishwe kwaye isasazwe. Ngoko ke, zonke zinexesha elithile lokusetyenziswa. Ukuba ixesha elilinganiselweyo liphelile, isantya sokuntshula, ukukhula okanye ukuveliswa kakuhle kwembewu yeentyatyambo kuya kuba ngaphantsi. Ke ngoko, eli linqaku elibalulekileyo ekufuneka abathengi bazi xa bejonge ukuthenga iintlobo zeentyatyambo.
Kwi-package, ubomi beshelufu yembewu buchazwe ngokucacileyo. Ke ngoko, unokujonga ngokulula kwaye uphande ngononophelo ngaphambi kokuthenga. Ukuba awuqinisekanga, unokubuza umthengisi kwakhona. Oku kuya kukunceda ukuba uphephe ukuchitha imali kunye nomzamo xa ukhula i-chrysanthemums ephuzi ekhaya.
Ufuna ukufumana enye imbewu yechrysanthemum etyheli Ewe, izinga lokuntshula mhlawumbi ngoyena mba ubalulekileyo. Basixelela ukuba kunokwenzeka kangakanani ukuba imbewu intshule. Le parameter ikwaprintwe kwipakethe yembewu ethe ngqo. Ngokutsho kweengcali, ukuze imbewu ikhule kakuhle, izinga lokuntshula kufuneka libe ngaphezu kwama-80%.
Kufuneka kuqwalaselwe izinga lokuntshula kwembewu
Isantya sokuntshula sinempembelelo enkulu kwintyatyambo yechrysanthemum. Ngembewu enesantya esisezantsi sokuntshula, isenokukhula. Noko ke, xa kufika ixesha lonyaka, isityalo asidumi. okanye iye yabonakala incinci kwaye imbi kakhulu, ichaphazela uqoqosho koosomashishini. Ke ngoko, le yeyona nto ibaluleke kakhulu yokuthenga imbewu elungileyo ekufuneka uyazi.
Khetha imbewu egcinwe kakuhle
Imekobume okanye amandla angaphandle anokuchaphazela kakhulu umgangatho wembewu. Xa ujonge ukuthenga, kufuneka unike ukhetho kwezo zipakishwe ngocoselelo nangokucocekileyo. Kwaye kuya kuba ngcono ukukhetha ukuthenga iingxowa zembewu kunye noluhlu olongezelelweyo lwe-vacuum. Oku kuya kubathintela ekubeni bangabi ngunda okanye “bafe” ngenxa yobushushu obugqithisileyo.
Usenokuba nomdla: BONANjengeentyatyambo ze-marigold
Indlela yokukhulisa kunye nokunyamekela i-chrysanthemums ephuzi ngokulula nangempumelelo
Xa kuthelekiswa nemithi emincinci, ukutyala kunye nokukhathalela ukusuka imbewu yechrysanthemum etyheli noko intsonkothe ​​ngakumbi. Nangona kunjalo, ukuba unenkathalo kwaye unenkathalo, izinga lempumelelo likhulu kakhulu. Ngokufanelekileyo, ungasebenzisa le miyalelo ilandelayo ilandelayo:
Imiyalelo malunga nendlela yokukhulisa i-chrysanthemum ngokufanelekileyo
Ukukhulisa i-chrysanthemum emthubi kwiimbewu, kufuneka ulandele la manyathelo asisiseko:
Imbewu ethengiweyo kufuneka ihluzwe kwakhona. Ukhetha ukukhetha imbewu enkulu, engqukuva kwaye engenazo iimpawu zezinambuzane. Ukuba uthenga imbewu kwiiyunithi ezithembekileyo, inani lembewu eliza kususwa alininzi, nokuba akukho nanye.
Emva kokuba imbewu ihluziwe, ifakwe emanzini afudumeleyo ukuze intshule. Ixesha lokucwina emanzini lithatha malunga neeyure ezisi-7 ukuya kwezili-10
Xa uchola imbewu oza kuyihlwayela, kufuneka ufefe umaleko obhityileyo womhlaba ngaphezulu. Okanye hayi, ungayifaka indawo nge-humus. Oku kunceda ukugcina ukufuma kwaye kugcina imbewu ingachatshazelwa zizinambuzane.
Emva kokuhlwayela, gcina ukunkcenkceshela rhoqo kunye nokunakekelwa kwemithi.
Indlela yokunyamekela i-chrysanthemums emva kokutyala
Emva kokuhlwayela, ukuze imbewu ye-chrysanthemum ephuzi ihlume, kufuneka uyinakekele kakuhle. Ezinye zezinto ozenzayo ngeli xesha zezi:
Indlela yokunyamekela i-chrysanthemums ephuzi emva kokutyala
Nkcenkceshela imbewu ka-2 ukuya ku-3 ngeveki ukugcina ukufuma. Ukuba imozulu inemvula eninzi, kufuneka unciphise ngenxa yokuba i-chrysanthemums emthubi ifumana lula amanzi
Ngaphambi kokuhlwayela imbewu kufuneka ichumise. Emva koko, faka izichumiso kwizityalo kula manqanaba alandelayo: xa izityalo zintshula iingcambu → Emva kweentsuku ezili-10 zokugalela urea kwaye ugalele iPotassium chloride → Emva kweentsuku ezingama-25 zokufakwa kweNPK → Emva kweentsuku ezingama-40 zokusebenzisa izichumiso zephosphate ezidityaniswe nomgquba.
Cinezela umphezulu uze uwuthene umthi emva kweentsuku ezimalunga nama-20 xa utyala, qhubeka uwenza kwiintsuku ezili-15 ezizayo.
Ukusebenzisa amayeza okubulala izitshabalalisi ukulawula izitshabalalisi, ukunqanda ubhubhani kade, …
Lithini ixabiso lembewu yechrysanthemum etyheli?
Ixabiso imbewu yechrysanthemum etyheli Kukho iindidi ezininzi kwiimarike namhlanje. Unokufumana kwaye ubhekisele kwixabiso elifanelekileyo. Amaxabiso embewu aya kuhla enyuka ukusuka malunga I-10 lamawaka / ipakethe yeembewu ezingama-200.
Usenokuba nomdla: BONANjengeentyatyambo ze-periwinkle
Umyezo weLanga – Indawo ehloniphekileyo yokuthengisa imbewu yechrysanthemum ephuzi, ixabiso elihle
I-Sun Garden iqinisekile ukuba yidilesi ebonelela ngeyona mbewu ilungileyo yegerbera namhlanje. Imbewu ye-Sun Garden inezinga eliphezulu lokuntshula, izityalo ezomeleleyo, kunye neentyatyambo ezininzi. Ukongeza kwimbewu yegerbera, iGadi yeLanga ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo imbewu yeentyatyambo njengembewu yentyatyambo ye-periwinkle, imbewu yeentyatyambo zeenkwenkwezi, imbewu yangokuhlwa yeprimrose, imbewu ye-nightingale chrysanthemum….
Ukuthengisa imbewu yeentyatyambo ezikhethiweyo ezinomgangatho ophezulu wokuqinisekisa ukuntshula kunye nokukhula okunamandla.
Imibala eyahlukeneyo yabathengi ukuba bakhethe ngokwezinto abazithandayo.
Xhasa abathengi ekutyaleni nasekunyamekeleni imithi ngokuqhagamshelana nomnxeba wokutsalela umnxeba ukufumana iingcebiso ezineenkcukacha.
Ukutyala nokukhathalela imbewu yechrysanthemum etyheli Akunzima ukuba ujongisisa. Ukufumana umthombo wembewu olungileyo kwaye ufumane amava angakumbi, ungabhekisa ku: https://vuonmattroi.com/
Idilesi: L2511 HH2A Indawo yedolophu yaseDuong Noi-Yen Nghia-Ha Dong-Hanoi
Umnxeba: 034 874 9704
Ndiyingcaphephe kwiimveliso zezolimo ezifana nezityalo zokuhombisa, iintyatyambo ezintsha, ukutya okucocekileyo kunye nembewu yezityalo. Ngeminyaka eyi-10 yamava kukhathalelo lwezityalo, nditsalele umnxeba kwangoko kwinombolo yam yefowuni 034.874.9704 24/7 thethwano.
Hạt giống Hoa Thiên Lý F1- Giá bán & Địa chỉ cung cấp uy tín | Hatgiongtihon.net